ब्रश निकल बाथरूमको नल २ ह्यान्डलहरू
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW बाथरूम सिंक नल ब्रश निकल व्यापक
वाह बाथरूम सिंक नल ब्रश निकल व्यापक
रेटेड 4.945बाहिर आधारित 18 मूल्यांकन ग्राहक
2321300 स्थापना निर्देशन
बाथरूम नल व्यापक ब्रश निकल 2321300 विवरण
अपडेटेड पप अप ड्रेन सेट अप गर्न र पारंपरिक नाली भन्दा प्रयोग गर्न सजिलो छ।
रचनात्मक द्रुत कनेक्ट टेक्नोलोजी - मूल रचनात्मक द्रुत लिंक भवन कुनै पल्म्बरको साथ आफ्नै आफ्नैमा स्थापना गर्न सरल छ! काठको नलको साथ पाइप स्थापना शुल्क बचत गर्नुहोस्!
--होल कोष्ठक –-१-इन्च प्रचलित लेआउटको साथ- सरल स्थापनाको लागि।
टाउको नल ब्रश निकल अन्त्य: २ ह्यान्डल नल ब्रश निकल लेआउट शैली क्लासिक रेट्रो। फिंगरप्रिन्ट घाटा, क्षतिको प्रतिरोध गर्नुहोस्। डेक माउन्ट भ्यानिटी नल भाँडा घर, नयाँ कन्डोमिनियम, एकल-अपार्टमेन्ट, मोटर घर, ट्राभल ट्रेलर, र घरेलू उपयोगको लागि स्वीकार्य छ।
Au बर्षे ग्यारेन्टीको साथ नल शीर्ष गुण: एबीएस एरेटरले %०% पानी र एन्टी-स्प्लेटर संरक्षण गर्दछ, जुन तपाईंको हथेलीमा सिधै हटाइएको छ (कुनै माग उपकरण छैन)। ड्रिप-फ्री सिरेमिक कार्ट्रिज सफल हुन्छ।
SKU: १2321300००।। विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: बेसिन मिक्सर, तीन प्वाल, व्यापक
12.1 x 8.6 x 3.1 इन्च
--प्वाल; व्यापक नल
व्यापक नल: -8-१-16 इन्च
चौडाई नल * १, स्थापना विशिष्टता * १, पप अप नाली * १
S *** ई2020-04-15
यो गुणस्तरको नल हो। यो सजिलोमा गयो (निर्देशनहरू प्रयोग गर्नुहोस्) र हुज र पप.अप ड्रेनको साथ आयो। यो मैले पाएको पहिलो पप अप हो। मलाई यो मन पर्छ। हुनसक्छ यसले धेरै कपाल स collect्कलन गर्दैन र सफा गर्नुपर्दछ। यो केवल दुई दिनमा भएको छ त्यसैले लामो आयुमा टिप्पणी दिन सक्दैन। म फेरि अर्डर गर्दछु।
राम्रो प्याक र राम्रो स्पष्ट निर्देशन। राम्रोसँग स्थापना गरियो। व्यापक नलको लागि ठूलो मूल्य। म खुशी छु कि मैले यो प्रयास गरेँ र फेरि अर्डर गर्न हिचकिचाउँदिन जब मलाई अर्को चाहिन्छ। गुलाब एक राम्रो स्पर्श थियो
स्थापनाको सरलता, स्थापना गर्न १ 15 - २० मिनेट जति लाग्यो। DIY को लागि ईन्जिनियर गरिएको र म करीव years० बर्षको हुँ घमण्ड्याको मुनि तल झार्न र स्थापनाबाट फिर्ता लिनको लागि लामो समय लाग्यो। इनस्टल पछि परीक्षण गरीयो र ड्रेन र फीडमा कुनै चुहावट छैन। उत्पादन द्वारा धेरै प्रभावित। मैले सबै फिटिंग ग्रीस गरें यद्यपि यस तथ्यले गर्दा दुई दिन लाग्यो पुरानो नल हटाउनका कारण सबै जडानहरू स्थिर भई पुरानो नल काट्नुपर्‍यो। मूल्य उत्पादनको गुणवत्ताको लागि अत्यन्तै उचित मूल्यको कारक पनि थियो। यति सरल स्थापना गर्न को लागी प्रदान गरिएको निर्देशन पनि आवश्यक पर्दैन।
नलहरू आज डेलिभर र स्थापित गरियो। राम्रो faucets, ठूलो बक्स स्टोरहरूमा डेल्टा वा प्राइस फिस्टर बराबरको आधा मूल्य। थाहा छैन कसरी उनीहरूले लामो समयसम्म समात्नेछन तर उनीहरूसँग राम्रो ठोस अनुभूति छ र स्थापना सीधा थियो। पप अप ड्रेन यस मूल्यमा एक धेरै राम्रो सुविधा थियो। एक तारा काट्दैछ किनकि दुईवटा स्क्रूहरू जुन काउन्टरको अंडरसाइडबाट तातो / चिसो ह्याण्डल कस गर्न प्रयोग गरिन्छ। मैले केवल समावेश गरिएको नट प्रयोग गरेर स्थापना गरें तर स्क्रूहरू ह्यान्डल लक गर्न महत्वपूर्ण छन् र ती प्याकेजमा थिएनन्।
यो सस्तो छ, चीनमा बनेको छ र दिशाहरू नलसँग ठ्याक्क मेल खाँदैन तर… WOW !! म कम्पोनेन्टको क्वालिटीमा चकित भएँ र स्थापनाको सजिलोपना धेरै स्वागत गरिएको थियो। यो एक धेरै महंगा मूल्य Pfister प्रतिस्थापित भयो जो शाब्दिक रूपमा केहि बर्ष भित्र अक्षम भयो। यो मलाई .5.5. hours घण्टा लाग्यो Pfister रस्ट र जंगको स्तर को कारण अनइन्स्टल गर्न - वास्तवमा तातो पानीको ह्याण्डलबाट शीर्ष वाशर छिजेल र यसलाई निकाल्न सि of्कको माथिबाट ड्रप गर्नुपर्‍यो। यो नयाँ WOWOW नल स्थापना गर्दा मलाई १ घण्टा भन्दा कम समय लाग्यो, कुनै लीक छैन, अद्भुत दृश्य! यसलाई किन्नुहोस्! यदि यो केवल एक वा दुई वर्षसम्म रहन्छ भने (जुन म यो AZ कडा पानीबाट पनि लामो समय सम्म रहन अपेक्षा गर्दछु), कसले ख्याल राख्छ? यस मूल्यमा, अर्को किन्नुहोस् र यसलाई कुनै समय मा फाल्नुहोस्। म बिल्कुल, सकारात्मक फेरि यो किन्नेछ!
मैले अर्डर गरेको बेला मलाई शंका थियो। उनीहरू साँच्चिकै राम्रो देखिन्थे, तर अफ ब्रान्ड भएको कारण म तिनीहरूलाई फिर्ता लिन तयार थिएँ यदि तिनीहरू गुणस्तरीय छैनन्। तर तिनीहरू बाकस भन्दा राम्रो देखिन्थे, स्थापना गर्न सजिलो थियो र उत्तम काम गर्नुहोस्! म तपाईंलाई थाहा दिन्छु कि यदि त्यो परिवर्तन हुन्छ भने, तर अहिलेसम्म मलाई तिनीहरूलाई खरीद गर्न कुनै पश्चाताप छैन, र मैले एक डबल व्यर्थको लागि २ सेट किनेको छु!
यो नल अर्को दुई हप्ताको लागि स्थापना हुने छैन जब पुन: निर्माण शुरू हुन्छ। जहाँसम्म, म तपाईंलाई निश्चित रूपमा भन्न सक्छु कि यस नलको समग्र रूप साँच्चै राम्रो छ र तीन मुख्य टुक्रा छुट्टै कपडा कन्टेनरमा समावेश थिए। मलाई पक्का आशा छ कि यो यस उत्पादको गुणवत्ताको संकेत हो।
एल *** डी2020-04-26
मैले सोचेको भन्दा भारी हाम्रो नयाँ घमण्डमा ठूलो देखिन्छ। सुपर सजिलो स्थापना, सबै आवश्यक भागहरू नलको साथ आयो। हाम्रो स्थानीय स्टोरमा उस्तै भेटियो तर यो यसको लागत times पटक थियो। फेरि किन्नेछ।
आर *** डी2020-05-02
मैले मेरो बाथरूमलाई नयाँपनको साथ ताजा गरें। यो नल मैले चाहेको जस्तै नै थियो तर ठुलो बक्स स्टोरहरूमा अत्यधिक मूल्य चुकाइएको थियो। मैले प्राय: केहि चीजको लागि बसेँ जुन मैले नहेर्ुञ्जेल मैले प्रेम गरेन। अब म धेरै खुसी छु।
म एक ठेकेदार हुँ र मैले भन्नु पर्ने छ कि यी मूल्यको लागि साँच्चिकै राम्रो गुण हो। स्थापना गर्न सजिलो र धेरै राम्रो तरीकाले बनाईएको र प्याकेज गरिएको। ठूला-बक्स स्टोरहरूमा उही नल दुई पटक मूल्य हुन्छ।
मलाई तुरुन्तै यस नलको रूप मनपर्‍यो। मैले भर्खर एक नयाँ घमण्ड खरीद गरेको छु र यो राम्रो देखिन्छ। म सिफारिश गर्दछु र म उत्पादन संग धेरै खुसी छु।
यी नलहरू केवल हाम्रो बाथरूम अपडेट गर्नका लागि चाहिएको थियो। राम्रो मूल्य र छिटो डेलिभरीको साथ राम्रो डिजाइन र गुणवत्ता।
नुहाउने कोठामा २ स्थापना गरियो
नल राम्रोसँग बनाइएको छ र इन्सिल्टेसन एकदम सजिलो छ। पर्याप्त निर्देशनहरू उनीहरूले स indicate्केत गरेनन् धातु फिटिंगहरू राष्ट्रिय पाइप मानक थ्रेडहरू हुन्। यो मर्मत गर्न वा प्रतिस्थापन गर्न धेरै सजिलो हुनेछ किनकि नल सुरक्षित तरीकाले पेंच ड्राइभर र तपाइँको औंलाहरूले हटाउन सम्भव हुनेछ। उत्तम डिजाइन
मैले f- time पटकको लागतको नलको प्रत्येक निर्माताको स्थापना गरेको छु - यसको गुणस्तर छ यदि राम्रो छ वा राम्रो छ - सजिलो स्थापना छ र खरीदसँग पूरै खुसी थियो।
उत्कृष्ट मूल्य। एक धेरै स्वच्छ परिष्कृत लुक र उच्च गुणवत्ताको उत्पादन। मेरो प्लम्बर यसको साथ धेरै प्रभावित थियो। मेरो लागि यसको बारे सबै भन्दा राम्रो चीज टच ड्रेन स्टापर हो - कुनै ब्रेक गर्न प्लन छैन!
यो एक धेरै राम्रो नल, र एक महान सम्झौता हो। प्लम्बरले मलाई सोध्यो म कहाँबाट आएको हो किनकि उनी केहि किन्न चाहन्थे।
आश्चर्यजनक नल र व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै कपडाको झोलाहरूमा लपेटिएको छ ताकि तिनीहरूले स्क्र्याच गर्दैनन् - कसैले मेरो लागि यसलाई स्थापित गरेको थियो र उसले यसलाई एकदमै सजिलो पायो र निर्देशनहरू स्पष्ट थियो - सोधेको छ कि यदि उनीहरूसँग नुहाउने फोउस छ कि छैन म आदेश दिन्छु one!
Faucets राम्रो गुणवत्ता थियो र तिनीहरू राम्रो देखिन्छन्। स्थापना बिना कुनै समस्या संग राम्रो भयो। केवल मलाई चाहिने चीज भनेको पानी आपूर्ति लाइनहरू थोरै ठोस हुनुपर्दछ। पानीका लाइनहरू जोड्ने क्रममा होशियार हुनुपर्दछ।